Al-shabaab:- Trump wa doqon lacag haysta – Kismaayo24 News Agency
Al-shabaab:- Trump wa doqon lacag haysta
by admin 24th July 2017 0118
Muuqaal Diiqado Soconaya oo ay Soo Saareen Xarakada Al-shabaab ay kaga hadleen hab dhaqanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump kaasi oo dhawaan ku guuleystay doorashadiii dalkaas ka dhacday.
Al-shaabab waxa ay sheegeeen in Madaxweyne Donald Trump uu yahay maal-qaabeen aan maskax lahayn, waxayna ku dhaliileen shacabka dalka Mareykanka qaabka ay ninkaan u dooreen.
Al-shabaab waxa ay sidoo kale muuqaal ay soo bandhigeen ay ku sheegeen in Donald Trump uu yahay Madaxweynihii ugu xumaa ee uu abid yeesho Waddan Dunida ku yaala,waxaana ay sheegeen in uusan ahayn nin u qalma madaxtinimada Mareykanka.
Dhanka kale dagaalyahanada Xarakada Al-shabaab waxa ay sheegeen in ay sii kordhin doonaan weerarada ay ka geystaan gudaha dalka Kenya xili wax ka yar labo todobaad ay ka harsan tahay doorashada Madaxtimada dalkaas.
Donald Trump markii uu la wareegay Talada Mareykanka waxaa uu kordhiyay weerarrada ka dhanka ah Xarakada Al-shabaab,waxaana warbixin ay soo saartay Dowladda Mareykanka lagu sheegay in Al-shabaab ay noqotay kooxda khasaaraha dhimasho ee ugu badan Afrika geysatay Sanadkii 2016ka.
Warbixin ay soo saareen ilo dhanka amaanka ah ayaa lagu sheegay in Weerarrada Al-shabaab ee Sanadkii 2016 ayaa lagu sheegay 359 weerar,waxaana ka dhashay dhimashada dad ka badan 700 oo Qof
Maraykanka oo wasaarada gashandhiga Somalia ugu deeqay…
Madaxweyne siilanyo oo xaaskii Cigaal u magacabay in ay Somalia….
Daawo Sawirro: Banaanbax Roob doon ah oo Maanta ka Bilowday Deegaanada uu ka Arimiyo Maamulka…
Lamaha Amanka Jubbaland oo so bandhigay sarkaal Itobiyaan ah oo…
Ahmed Madoobe Oo Bilaabay In Uu Gato Dhulka Jubbaland Qaybo Ka Mid Ah .